Xildhibaan ka cabanaya been-abuur uu aheegay in laga sameeyey xisbigiisa – Kalfadhi
Xildhibaan ka cabanaya been-abuur uu aheegay in laga sameeyey xisbigiisa
Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi ayaa beeniyey in ay jirto war ay si wadajir ah Xisbiyada Mucaaradka Soomaaliya uga soo saareen go’aanka ay Kiinya ka qaadatay Soomaaliya. Warqadda uu ku qoran yahay warkaas uu beeninayo, oo uu ku eedeeyey in waxa ku qoran ay qaateen waraabin ay ku jirto BBC-da, ayuu sheegay in lagu daabacay “Cabdalla Shiddeeye”, sida uu hadalka u dhigay.
“Qoraal been abuur ah, oo kasoo baxay Xafiiska Cabdalla Shiddeeyaha ayaa isla asagii soo sameeyey buun-buuninayaa, Alle amarkii” ayuu Xildhibaan Fiqi ku yiri dhigaal uu kusoo daabacay Feysbuuggiisa, isaga oo soo dhigaya waraqadda uu ku tilmaamayo iney tahay been-abuur. “Ma jirto Xisbiyo Siyaasadeed oo si wadajir ah warqad u soo saaray” ayuu sidoo kale ku yiri dhigaal kale oo uu isla arrintaan ka sameeyey.
Idaacadda BBC-da, oo uu sheegay in markii 2-aad ay ka been abuuraneyso 2 todobaad gudahood, ayuu ka dalbaday raali-gelin iyo iney ka cudur daarato warkaas uu ku tilmaamay been-abuurka ee uu daabacay. “Waxaa looga fadhiyaa in ay ka cudur-daartaan warqaddaan ay bogagooda ku faafiyeen” ayuu yiri Xildhibaanka oo soo daabacaya warka uu ka cabanayo sida loogu daabacay Baraha BBC-da.
Dhigaal uu Xildhibaan Fiqi uga cabanayo baahinta BBC-da
Inta badan, waxaa Baraha Bulshada iyo Wabseydyada aad loogu arkaa warar aan sal iyo raad toona lahayn oo loo saarinayo qof, koox ama hay’ad, taas oo ay aqristayaashu aad ugu adag tahay in ay horay ka xaqiijiyaan run ahaanshiyaha warkaas, waxaana shalay oo dhan Baraha Bulshada wareegeysay warqad la leeyahay waxay Dowladda Soomaaliya ugu jawaabeysay Kiinya, laakiin been-abuur ahayd, iyada oo ay saraakiil fara badan oo dowladda u shaqeeya ay bogaggooda rasmiga ah soo dhigeen iney xogtaasi been tahay.
Aqristayaasha ayaa u muuqda in aysan hadda haysan fursad lagu yareen karo been-abuuradaas loo soo gudbiyo, waxayse kaashan doonaan sida hadba qofka aqristaha ahi uu yahay wacyigiisa fahamka xogaha la soo dhigo Baraha Bulshada iyo Wabseydyada iyo kartida uu u leeyahay inuu ku kala baandheysto warka runta ah iyo kan la been-abuuray.
Dhigaalka uu Xildhibaan Fiqi uga cabanayo warqadda uu sheegay in lagu soo qoray Cabdalla Shiddeeye
Arrintaas waxaa sal u ahayn doona sida uu aqristuhu u kala xusho baraha xogaha faafiya iyo sida ay runta u kala sheegi og yihiin, oo lagu daray aqoonta uu u leeyahay Baraha Rasmiga ah ee shaqsiga, kooxda ama hay’addu ku baahiso warkeeda, si uu uga xaqiijiyo, inkasta ay suurtagl tahay in barahaas naftirkooda aan la soo dhigin war run ah. Dhibtaas ay aqristaayashu qabaan warbaahintana wey saameysaa.
Haweenka ku jira Baarlamaanka Hirshabeelle oo ku biiray ololaha raadinta xaqa siyaasadda dumarka
Kiinya oo Soomaaliya ka dalbatay in ay ka tanaasusho sheegashada badda ay ku haysato